: at 1/25/2010 07:00:00 PM
Anonymous said... | Monday, January 25, 2010 7:40:00 PM
ဆေးရုံကြီးကိုရောက်ဖူးတာ လက်ချိုးရေကြည့်ရင်တောင် လက်ဆယ်ချောင်းမပြည့်ဘူး
ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့ လှည့်ပြန်သွားရရှာမဲ့လူတွေကို ပြေးမြင်မိတယ်။
နောက်ဆုံးပုံက ..တကယ်ပဲကွာခြားချက်နော်။ ...
သြော်.. ပိုက်ဆံ ပိုက်ဆံ...
Anonymous said... | Monday, January 25, 2010 8:04:00 PM
ဖွားကီ ပုံတွေကို မူပိုင်လုပ်နေတာလားးးးးးးး အနော်လဲ လုပ်ချင်တယ်း) နောက်ဘာဆက်လာဦးမလဲ စောင့်နေတယ် မျှော်နေတယ် ဒါပဲ
ကိုချစ်ဖေ said... | Monday, January 25, 2010 8:48:00 PM
စရိတ်မျှပေးစရာ မရှိသူတွေ အတွက်တော့ စရိတ်မျှပေးနိုင်အောင်လုပ်ပေါ့ဗျာ..ဘယ့်နယ်..အကုန်လုံး ပြည်သူ့ တွေ ဆေးဝယ်ရတာ စရိတ်မျှပေးရတာကြာပီ မို့လို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ လို့ခေါ်တာလေ နို့မို့ အစိုးရဆေးရုံလို့ ခေါ်မှာပေါ့..ဒေါ်ကိရဲ့...
Anonymous said... | Monday, January 25, 2010 9:24:00 PM
သြော်.. ရွှေပြည်ရွှေရွာက ရှားပါးပုံရိပ်လေးတွေ အလွမ်းပြေကြည့်ခွင့်ရပြီ။ ဖန်တစ်ရာထေနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကလွဲရင် အားလုံးကိုလွမ်းတယ်။
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကလည်း သစ်လွင်တောက်ပနေလိုက်တာ ထင်းလို့။ အရှေ့က သစ်ပင်တွေ တစ်ပင်မှမရှိလို့တော့နဲ့တူပါရဲ့။
ရန်ကုန်မှာတုန်းကဆို အိမ်ပြန်ရင် ညတိုင်း အဲ့ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်နေကျ။
ကိုအောင် said... | Monday, January 25, 2010 9:38:00 PM
ပုံတွေကြည့်ရတာ ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ်။
သုခုမလေဒီ said... | Monday, January 25, 2010 9:48:00 PM
အမလေး မှားပါတယ်၊ ဆေးရုံအကြောင်းတွေပါလားးးး
သနားစရာ လူနာပုံတွေပါထည့်သင့်တာ အမရ။
စရိတ်မျှပေးကို မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေလေ။ မျှကိုမပေးနိုင်ဘူး၊ စားစရာတောင် ပိုက်ဆံမလောက်ကြလို့
အိုကေ အပိုင်း ၃မျှော်....
အိုက်ခီလောက် said... | Tuesday, January 26, 2010 12:36:00 AM
အော် ငါ့အမားနှယ့်နော် ရွှေပြည်တစ်ခါပြန်လိုက်တာ
ပြောစရာကို မကုန် တစ်ထောင်တစ်ည ပုံပြင်လို ဖတ်ရတော့မယ် အဟားးးးးးးးးးးးး
အမှန်ပြောတဲ့လူနဲ့ ကြောင်သူတော်ကြွက်သူခိုး နဲ့ တိုးမိတာနဲ့ တူပါ့ ဟဟ
ခြေလှမ်းသစ် said... | Tuesday, January 26, 2010 1:11:00 AM
တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးမရှီတဲ့အစိုးရမျိုး ဒိုးခိုင်းလိုက် တော့ဗျာ ... အဲ ဒါပေမယ့် သူတိုးတက်မှုတွေ လုပ်နေတာ ရှိတယ် ... ဥမင်လှိုင်ခေါင်း ... နေပြည်တော်သစ် တိုက်လေယဉ်တွေ .... လေ .... ဒီအစိုးရက အလကား ပြည်သူတွေကို မသေသေအောင် သတ်နေတာပဲဗျ .. တိုင်းပြည်အတွက် သူတို့မှာ စေတနာ အမှန်မရှိပါဘူးဗျာ ....
Shinlay said... | Tuesday, January 26, 2010 1:13:00 AM
thawzin said... | Tuesday, January 26, 2010 1:42:00 AM
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို အပြင်မှာ မမြင်ဖူးဘူး။ ဆေးရုံဆေးခန်းကို ၂နှစ်သားလောက်ပဲ ရောက်ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကလဲ သေဖို့ရက်ချိန်းသွားတောင်းလိုက်တာပဲ။ ရွာက ယမ်းကုနဲ့အဆင်မပြေရင် ၀ရုန်းသုန်းကား ဆေးရုံတင်ကြတာ ရွာကမျက်နှာမွဲတွေဓလေ့လေ။ သေဖို့ရက်သိပ်မကျန်တော့ ရွာမှာသေရအောင်ဆိုပြီး ရွာပြန်ခေါ်လာခဲ့ကာမှ ရွာကဦးကြီးတယောက်က ကောက်မွေးစားလို့ အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့ရတာလေ။ ဒါကြောင့်လဲ လူကောင်က သေးသေးကွေးကွေးဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ အခုတော့မသိဘူး။ ဆရာဝန်ဘွဲ့ရဆိုပြီး လာဆေးကုတဲ့သူရှိဘူးဗျ။ တခါလာပါသေးတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းစားပြီးသူတို့ အသက်မွေးသွားကြရတယ်။ ရွာကလူက အကြွေးကုတာနဲ့ ကျန်းမာရေးကလဲ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်မှမဖြစ်တော့လဲ သူတို့ပြန်ပြေးကြရတာပေါ့ဗျာ။ ရေကြည်ရာမြက်နုရှာဆိုသလို ကျွန်တော်တို့ရွာကို တာဝန်ကျတဲ့သူတွေကတော့ ရွာခံကလွဲရင် ပြန်ပြေးကြတာများတယ်။ ဒါကလဲ ရွာကစီးပွားရေးဆိုတာ မယ်မယ်ရရမရှိတာလဲပါတာပေါ့။ ကောင်းပါ၏အစ်မရယ် မှတ်သားသွားပါတယ်
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Tuesday, January 26, 2010 6:50:00 AM
Anonymous said... | Tuesday, January 26, 2010 8:32:00 AM
ဆေးရုံ ဆို တအား ကြောက်တယ် ...သူရဲ တစ္ဆေ ကြောက်ရ မှာ ထက် နာကျင် ခံစားရမယ့် ဒုက္ခ ...
ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင် ရင် ခါးစီး ခံစားရမယ့် ဒုက္ခ ...
ငွေရရင်ပြီးရော လူနာကို အချိန်ဆွဲ ပြီး ရောဂါတခြား
ဆေးတခြား ကုသမယ့် ဆရာဝန်မျိုးနဲ့
တွေ့ကြုံ ( မှန်မှန်ကန်ကန် ကုသပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေလည်း အများကြီးပါ ) ရမယ့် ဒုက္ခ ...
အဲသည့် ဒုက္ခ တွေ အကြောက် ဆုံး ပါ ... :'-(
သွေးအိတ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း မသိသေးတာ
သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိကိ ...
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ said... | Tuesday, January 26, 2010 11:09:00 AM
ဆေးရုံကြီးနဲ့တော်တော်လေးရင်းနှီးခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပူးတေက ဆရာဝန်လဲမဟုတ်၊ သူနာပြုမဟုတ်၊ လူနာမဟုတ်နော်...
ဆေးရုံကြီးက ခေါင်မိုးတွေက မိုးယိုနေပြီတဲ့ သူများပြောတာ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။
ကိုရေတမာ said... | Tuesday, January 26, 2010 11:46:00 AM
စိတ်မကောင်းဘူး.. သွေးအိတ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ခုမှသိရတာ သတ္တ၀ါတွေ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းးး
နွေးနေခြည် said... | Tuesday, January 26, 2010 1:51:00 PM
ဆေးရုံကြီးထဲ ၃၊ ၄ ခေါက်ပဲရောက်ဖူးတယ်။ ရောက်ပြီးရင် ပြန်မထွက်တတ်တော့ဘူး။း)
လသာည said... | Tuesday, January 26, 2010 7:14:00 PM
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ဒီလာခါနီး ဆေးစစ်ရမယ်ဆိုတုန်းက ရောက်ဖူးတာ.. ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ အနီးအနား ဆေးခန်းလောက်တင် သွားဖူးတာဆိုတော့ အတွင်းကျကျမသိဘူး။ အင်း ဒီထွက်ဖို့.. ဆေးစစ်တာအတွက်တော့ ပိုက်ဆံတော်တော်ပေးခဲ့ရတာပဲ..။
ahphyulay said... | Tuesday, January 26, 2010 9:06:00 PM
မိုင်တစ်ထောင်ခရီးရဲ့ အစက ပထမဆုံး ခြေလှန်းပဲတဲ့ ။
အမက မြန်မာ ပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေး မိုင်တစ်ထောင်ခရီး
ရဲ့ အစ ကိုပဲ မြင်ခဲ့ ရတာကိုးလို့ ။ မလောပါနဲ့ ။
အစ ပဲရှိသေးတာပဲဟာ။ ဆိုင်းဘုတ်က ပြန်ရေး ပြင်ရေး
ဓါးထက်ထက် said... | Tuesday, January 26, 2010 11:01:00 PM
ရွှေပြည်ကြီးမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော အယုတ် အလတ် အမြတ် မရွေး လူသား အပေါင်း ကျမ္မာစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ အစဉ်ပို့ သလျှက်ပါ သိပြီးကြတဲ့ အတိုင်း မကျမ္မာလို့ တော့နာပြီသာမှတ် အနဲဆုံးစရိပ်မျှပေးနဲ့ တွေ့ မယ် နဲနဲဆိုးရင် သွေးလွန်တုတ်ကွေးနဲ့ အစာအိမ်ရောဂါမှား ခွဲစိတ်ကုသလိုက်မယ် ဒါ့ ထက်နဲနဲပိုဆိုးရင် ဆီးချို သွေးတိုး နှလုံး ရောဂါသည်ကို သွား (၁၁)ချောင်းနှုပ်ကုမယ် ပြီးရင် တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးတဲ့ သူကိုခွဲစိတ်ကုသမယ် မေ့ ဆေးလေးလဲပိုပိုသာသာထိုးပေးမယ် ဟုတ်ပြီဒါဆို အားလုံး (ok) ပြီလား သက်သာပျောက်ကင်းသွားလားလို့ မေးရင် ဟုတ်ကဲ့ အားလုံး(ok) ပါတယ် သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားတယ်လို့ ဖြေပါရစေ နောင်တကြိမ်ဘယ်သောအခါမှ မနာကျင်တောံထို့ ပြောင့့်အောင်သက်သာသွားပါတယ် တခါတည်းအပြီးလဲပျောက်ကင်းသွားပါတယ် (အသက်ပါ) ထို့ ကြောင့်အသက်ဥာဏ်စောင့်ဆိုသလို ကို့ ကိုယ်ကို သတိကြီးစွာထား၍ ကျမ္မာအောင်နေကြပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ သလိုက်ရပါတယ်
မေဓာဝီ said... | Wednesday, January 27, 2010 5:15:00 AM
မကိရေ ... ဒေါက်တာမြင့်ဆွေက မှတ်မိသေးတယ် ဂျပန်ခေတ်ဆေးရုံကြီးဝယ် ရေးသလိုမျိုး ... မကိလဲ မှတ်မိသေးတယ် ( ) ခေတ် ဆေးရုံကြီးဝယ် လို့ ရေးပါလား။ ပုံလေးတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာပေါ့။ ကျမတို့လည်း ဗဟုသုတရအောင်လို့ပါ။
မိုးခါး said... | Wednesday, January 27, 2010 9:47:00 AM
~ဏီလင်းညို~ said... | Wednesday, January 27, 2010 9:30:00 PM
(ဘန်နာကပုံက နာဒို့ရန်ကင်းအစပ်က ဆန်ဒိုးနားဟော်တယ်ဂျီးမှတ်လား....ဟိုနေထဲက ပြောမလို့...။ လှတယ်...း)
Nge Naing said... | Friday, January 29, 2010 8:12:00 AM
ကိကိရေ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက ကြည့်ရတာ ကျက်သရေရှိလိုက်တာ။ ဒီက နာမည်ကြီးဆေးရုံတွေထက် အများကြီးလှပတင့်တယ်တာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စားပွဲခုန်တွေပေါ်မှာ ကွန်ပြူတာ တလုံးမှ မတွေ့ရဘူး။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ သူနာပြုက ဆရာဝန်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း မသွေမတိမ်း လိုက်နာလို့မရဘူး။ ဆရာဝန် ဆေးမှာ ရေးထားပေးလို့ အဲဒီဆေးကို ပေးမိပြီး လူနာတခုခု ဖြစ်သွားရင် ဆရာဝန်မှာ တာဝန်မရှိဘူး မိမိ professional ကို အသုံမချလို့ ဆိုပြီး လူနာဆီကို တိုက်ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့ သူနာပြုမှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်က စာရွက်မှာပဲ ရေးပေးထားတယ်။ လူနာနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရတဲ့သူက တာဝန်အရှိဆုံး ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ပြာယာပြာယာနဲ့ လူနာအတွက် မသင့်တော်တဲ့ဆေးတွေကို မှားပြီး ရေးထားပေးခဲ့ရင် သူနာပြုက အမြဲပြန်ခေါ်ပြီး ပြန်လာရေးခိုင်းရတယ်။ Management မဟုတ်ဘဲ Professional အလုပ်သာ ဖြစ်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြု အလုပ်လုပ်တာ အပေါ်အအောက် စီးဆင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူး ကိုယ်စီတာဝန်ယူတဲ့ ပုံစံပဲ ရှိတော့တယ်။